Boriborintany faha-3 Azo hivarotana ireo sisin-dalana malalaka
Disadisa amin’ny MICTSL Hitokona lavareny ireo mpitatitra sy ireo “Transitaires”
Nanamafy ny olana misy eo amin’ny orinasa MICTSL mpikirakira kaontenera ao amin’ny Port Toamasina sy ireo mpitatitra ary ireo “Transitaires” ny fanambarana nataon’ity orinasa ity an-gazety farany teo.
Mitohy ny asa fanadiovana sy fandaminana eo anivon�ny boriborintany faha-3. Laharam-pahamehana amin�izany ny fanamboaran-dalana sy ny fanatsarana ny tsena fivarotana ao anatin�ireo fokontany 34 mandrafitra ny distrika fahatelo.
Ezaka ankehitriny, ohatra, ny fanomezana endrika vaovao ny tsena «Etal» eny Andravoahangy. Efa tontosa hatrany amin’ny 60% moa ity asa fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny mpitantana ny boriborintany sy ireo mpivarotra eny an-toerana ity. Tsy ampy anefa ny fotodrafitrasa manoloana ny fahantrana lalim-paka mianjady amin’ny mpiara-belona izay mirotsaka mivarotra avokoa, hoy ny delege Andriamamonjisoa Rado. Iaraha-mahalala ihany koa ny fifanenjehana tsy misy fiafarana eo amin’ny polisy monisipaly sy ireo mpiavotra ankalamanjana. Antony nahatonga ny fiadidiana ny boriborintany faha-3 hanome alalana tsy ho ela ny fivarotana amin’ireo sisin-dalana malalaka. Fepetra takiana amin’ireo mpivarotra kosa anefa ny fanadiovana, ny filaminana ary ny fandoavan-ketra ara-dalàna ny faritra ivarotana, araka ny fanampim-panazavan’ity tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny boriborintany faha-3 ity.